Jose Mourinho oo kala doortay 3 daan Xiddig kii uu u qaadan lahaa daafaca bidix ee Manchester United | Heeersare.com
(24-6-3028) Macalinka kooxda Manchester United ayaa kala doortay saddexda difaac bidix ee kala ah Alex Sandro, Danny Rose iyo Jordi Alba oo dhamaan kooxdiisa Manchester United lala xidhiidhinayo. Inkasta oo uu Mourinho difaaca bidix ee Old Trafford uu ku haysto Ashley Young iyo Luka Shaw waxa uu haddana doonayaa in uu keensado difaac kale oo bidixda si fiican uga ciyaari kara.
Manchester United ayaa tan iyo xagaagii hore lala xidhiidhinayay Alex Sandro oo Juventus ka tirsan isla markaana ay Chelsea si wayn u doonaysay iyo Danny Rose oo Tottenham muran badan la soo galay laakiin waxaa dhawaan ku soo biiray difaaca bidix ee kooxda Barcelona ee Jordi Alba.
Mourinho ayaa markii hore doonayay in Alex Sandro uu keensado Old Traffrod laakiin kooxda Juventus ayaa qiimo waali ah dul dhigtay xidiga ree Brazil taas oo Red Devils iyo Chelsea u diiday in ay xidigan keenaan Premier league laakiin sidoo kale United ayaan ku guulaysan saxiixa Danny Rose kaas xataa cadho wayn ka muujiyay joogitaankiisa Spurs.
Laakiin Don Balon oo Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in Jose Mourinho uu doonayo sidii uu Jordi Alba uga soo saari lahaa Camp Nou isla markaana uu ugu xalin lahaa difaaca bidix ee kooxdiisa Man United iyada oo wali aan la xalin mustaqbalka difaaca ree Spain ee Alba uu ku leeyahay Barcelona.
Jordi Alaba ayaa dhawaan sheegay in mustaqbalkiisa Barcelona aanu isaga oo kaliya gacanta ugu jirin balse haddii ay isaga tahay uu waayihiisa ciyaareed oo dhan uu ku qaadan lahaa Barcelona balse ay kooxdiisu saamayn ku yeelan doonto.
Alba oo mustaqbalkiisa ka hadlayay ayaa yidhi: “Anigu waxaan aad ugu fiicanahay Barca, haddii ay aniga igu xidhnaan lahayd, inta noloshayda ka hadhsan oo dhan ayaan joogi lahaa, laakiin aniga iguma xidhna laakiin waxay ku xidhan tahay waxa ay kooxdu doonayso”.
Sidoo kale Alba ayaa sheegay in joogitaannkiisa Barcelona uu ku xidhan yahay bandhiga uu sameeyo wuxuuna yidhi: “Waa hagaag, waxay sidoo kale ku xidhan tahay bandhigayga kaas oo ahaa xili ciyaareed aad u fiican, laakiin anigu ma arko naftayda oo Barca dibada uga baxaysa”.
Si kastaba ha ahaatee, Jose Mourinho ayaa bartilmaameedsanaya Jordi Alba iyada oo aanu ku qanacsanayn Luka Shaw isla markaana aanu Ashley Young kulankasta ciyaari karin maadaama oo macalinka ree Portugal doonayo in Premier League iyo Champions league ay xili ciyaareedka cusub u ordaan.
heersare Xafiiska Wararka Muqdisho